Yeremia 35 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Rekabfo setie; ɛsɛ sɛ obiara sua (1-19)
35 Asɛm a efi Yehowa hɔ baa Yeremia nkyɛn wɔ Yuda hene Yehoiakim,+ Yosia ba no nna no mu ni: 2 “Kɔ Rekabfo no fi,+ na wo ne wɔn nkɔkasa, na fa wɔn bra Yehowa fi, na fa wɔn kɔ adidibea no baako mu, na ma wɔn nsã nnom.” 3 Enti mefaa Habasinia ba Yeremia ba Yaasania ne ne nuanom ne ne mma mmarima nyinaa ne Rekabfo fifo nyinaa, 4 na mede wɔn baa Yehowa fi hɔ. Na mede wɔn kɔɔ nokware Nyankopɔn no nipa, Hanan, Yigdalia ba no mma adidibea hɔ, nea ɛwɔ mpanyimfo no adidibea a ɛwɔ ɔpon ano hwɛfo Salum ba Maaseia adidibea atifi no nkyɛn hɔ no. 5 Ɛnna mede nkuruwa a nsã ayeyɛ no ma ne bobesa nkuruwa sisii Rekabfo fifo no anim, na meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monnom nsã.” 6 Nanso wɔkae sɛ: “Yɛrennom nsã, efisɛ yɛn agya Rekab ba Yehonadab*+ hyɛɛ yɛn sɛ, ‘Mo ne mo mma nyinaa, monnnom nsã da. 7 Munnsi dan, munnnua aba, monnyɛ bobefuw,* na ɛnsɛ sɛ munya bobefuw nso. Mmom, montena ntamadan mu daa sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛtena ase akyɛ wɔ asaase a moyɛ ahɔho wɔ so no so.’ 8 Ɛno nti, nea yɛn agya Rekab ba Yehonadab ka kyerɛɛ yɛn no nyinaa, yɛda so ara di so. Enti yɛne yɛn yerenom ne yɛn mma mmarima ne yɛn mma mmea nyinaa, yɛmfaa nsã biara nkaa yɛn ano da. 9 Na yensisi adan ntena mu, na yenni bobe mfuw anaa nsaase anaa aba. 10 Yɛakɔ so atena ntamadan mu, na yɛatie nea yɛn agya Yehonadab* ka kyerɛɛ yɛn no nyinaa. 11 Nanso bere a Babilon hene Nebukadnesar* foro bɛtow hyɛɛ asaase no so no,+ yɛkae sɛ, ‘Mommra mma yɛnkɔ Yerusalem, na yenguan Kaldeafo asraafo ne Siriafo asraafo no,’ enti seesei yɛte Yerusalem.” 12 Na Yehowa ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: 13 “Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Kɔ na kobisa Yuda mmarima ne Yerusalemfo sɛ: “Mantu mo fo daa sɛ muntie m’asɛm?”+ Yehowa asɛm ni. 14 “Rekab ba Yehonadab ka kyerɛɛ n’asefo sɛ wɔnnnom nsã, na wɔadi n’asɛm so, na ɛde besi nnɛ nyinaa wɔnnom nsã; wɔayɛ saa de adi wɔn agya ahyɛde so.+ Nanso, me de, mekasa kyerɛɛ mo mpɛn pii,* nanso moantie me.+ 15 Na mekɔɔ so somaa me nkoa adiyifo no nyinaa baa mo nkyɛn; mesomaa wɔn mpɛn pii*+ bɛka kyerɛɛ mo sɛ, ‘Mepa mo kyɛw, obiara nsan mfi ne kwammɔne so+ na monyɛ adepa! Munnkodi anyame foforo akyi, na monnsom wɔn. Sɛ mutie me a, mobɛtena asaase a mede maa mo ne mo agyanom no so daa.’+ Nanso moanyɛ aso amma me, na moantie me. 16 Rekab ba Yehonadab asefo no adi wɔn agya ahyɛde a ɔde maa wɔn no so,+ nanso ɔman yi de, wɔantie me.”’” 17 “Enti nea Yehowa, asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no aka ni: ‘Hwɛ, mmusu a meka kyerɛɛ Yuda ne Yerusalemfo nyinaa sɛ wɔantie me a, mede bɛba wɔn so no, mede ne nyinaa bɛba wɔn so,+ efisɛ mekasa kyerɛɛ wɔn, na wɔantie; mefrɛɛ wɔn daa, nanso wɔannye me so.’”+ 18 Na Yeremia ka kyerɛɛ Rekab fifo no sɛ: “Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Esiane sɛ moatie mo agya Yehonadab ahyɛde, na moakɔ so adi n’ahyɛde nyinaa so, na moyɛ nea ɔkae sɛ monyɛ nyinaa nti, 19 nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Daa wobenya Rekab ba Yehonadab* aseni a obegyina m’anim asom me.”’”
^ Nt., “Yonadab.” Ɛyɛ Yehonadab a wɔatwa no tiaa.
^ Nt., “mesɔree anɔpatutuutu somaa wɔn.”